Gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan ITOOPHIYUMMAA fi sirna ilaalcha kanaan ijaaramedha. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGufuun qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan ITOOPHIYUMMAA fi sirna ilaalcha kanaan ijaaramedha.
– Gufuun qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan ITOOPHIYUMMAA fi sirna ilaalcha kanaan ijaaramedha. ITOOPHIYUMMAAn ilaalcha koloneeffataan humnaan saba Oromoorratti fe’edha.
– ITOOPHIYUMMAA fi OROMUMMAAn waliif diina. Warri aangoo sirna Itoophiyaa qabatan (Amaara haa ta’u Tigiree, Oromoo haa ta’u Guraagee, Sidaama haa ta’u Somaalee …) meeshaa ITOOPHIYUMMAA hidhatanii OROMUMMAA lolu. OROMUMMAA lolan malee hin jiraatan.
– Oromoon ammoo cunqursa jalaa bahuuf OROMUMMAA hidhatee lola. Oromoon OROMUMMAA jabeeffatu malee bilisoomuu hin danda’u.
– OROMUMMAAn madda tokkummaa Oromoo ti. Oromummaan dhiiga, akeeka, galma.
– Itoophiyaa keessatti lolli guddaan deemaa ture, jiruu fi itti fufu lola OROMUMMAA fi ITOOPHIYUMMAA giduutti gaggeeffamudha.
– Hayyoonni, qabsaa’onni fi hooggantoonni siyaasa Oromoo keessa jiran har’a waan lama keessaa tokko filachuu qabu: takkaahuu ITOOPHIYUMMAA filatanii cunqursa saba keenyarratti fe’ame daran hammeessuu, yookaan OROMUMMAA filatanii bilisummaa ummata keenyaaf gumaachuudha.
– Yoo OROMUMMAA filatte dantaa dhuunfaa kee gani. Maqaa, qabeenya, aangoo fi anatu caalaa beekaa keessaa of baasi. Gandaa fi amantiitti maxxanuun deggersa hamma fixeensa ganamaa hin turre argachuuf tattaafachuu dhaabi. Dhugaadhuma keen bilisummaa saba kanaaf qabsaa’i.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu Kan turan Oromoon Harargee Baatii Tokkoo as Mootummaan Gara Aanaa Abee Dongoroo Geessee qubsiise!
Qubattoonni Saba Amaaraa Bara Dargii bakka Sana qubsiifamani akkamiin lafa keenyarra qubattu jechuun Qawwee fi Meeshaalee Qara qaban biroodhaan namoota hedduu miidhani! Hogganaa Fayyaa naannoo sanaa dabalatee Namoota 15 oltu Mana yaalaa, Hospitaala Dongoroo fi Shaambuu jira!
Oromoon Lafa isaarratti akka saba lammaffaatti ilaalamaa jira!
Raffisaa Taammanaa Guutuu irraa
Hanga sa”a 3:00(9:00tti) Injfannoo WBOn Zoonii Lixaa guyyaa har’aa Waxabajjii 7/2020 bakkoota addaa addaatti galmeesse waraana diinaa boquu Cabseera.
1.G/Q/Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Heenaa bakka addaa Kollaatti.
2 G/Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa bakka addaa Liqixii jedhamutti injifannoo goolabameera.
3.G/Wallaggaa Lixaa Najjoo fi Biilaa giddiutti 3f lama haleeluun injifannoo boonsaan galmaa’eera.
Warraaqsi Galaana Ummataa Itti Fufa. Epp’n inuma kufa.Bilisummaan kaataa dhufa
Oromoon Galaana irra dhangalaana.Gabroomfattuu mataasheerra yaana.
Fiixee gaaraatti olbaana. Injifannoon Ummata Oromoof.
Abdo Abajobir Abamagal
Jaalataa Lammii New 2016 Oromo/Oromia song “Seenaa goota Jimmaa”
Nama tokko waan inni haasawu irraa bakka inni dhufe barta!
Marii Hayyootaa fi Ajajoota WBO waliin WaxabaJJii 06 2020 Koree Deeggarsa WBO Idila Addunyaa
Obbo Shimallis jijjiiramni isin fiddan nama fixuu yoo taate malee homaa argaa hin jirru. Mee jijjirama jechaa jirtan kana nuu tarreessaa?